घरबेटिले किन निकाले पल लाई ! – Yuwa Aawaj
घरबेटिले किन निकाले पल लाई !
बैसाख २२, २०७८ बुधबार 341
काठमाडौं : पल शाह अहिलेका चर्चित नायक हुन् । म्युजिक भिडियोदेखी सिनेमामा समेत सक्रिय पल अहिले महंगो पारिश्रमिक लिने नायक मध्येमा पर्छन् ।
उनको बुवाको चाहना थियो छोराले सैनिकको जागीर खाओस् । तर उनले बुवाको पुरा गरेनन् । फिल्म एडिटर बन्नका लागि केही समय उनले मिडिया प्लसमा जागरि समेत खाए । जतिवेला उनको तलब थियो मासिक २५ सय रुपैंया ।
सोही समय हो उनले समयमा कोठाभाडा नतिरेकै कारण डेराबाट निकालिएका थिए । कतिपयले भन्ने गर्छन् अनामनगर, पुरानोबानेश्वर, पुतलीसडक, वागवजारलगायतका केही होटलमा उनले उधारो खाजा खाएको पैसा तिर्न बाँकी छ । राजधानी दैनिकमा यो खबर छ ।
Prevनेपालले टि–२० बरियतामा सबै एसोसिएट राष्ट्रलाई उछिन्यो, नेपालभन्दा अगाडि टेस्ट राष्ट्र मात्र !
Nextबिश्व रेकर्ड बनाउने कुशल भुर्तेल भन्छन् : नेपालको लागि बिश्वकप खेल्न चाहन्छु ।(हेर्नुस भिडियो)